China SEBIC 26 inch yakakurumbira nzira yemitambo dhizaini yakakwira magetsi emagetsi emigwagwa bhasikoro fekitori uye vagadziri | Kusekerera
Motokari Brushless, 48V 500W Kumashure Mota
Max Speed 30-50km / h, 40KM / H kana zvimwe
Model Nhamba BEF-ID26RF
Chimiro 26 * 2.125 ″ aruminiyamu chiwanikwa 6061, TIG welded
Forogo kuturika 26 * 2.0 ″, chiwanikwa + chiwanikwa
Tire INNOVA 26 * 2.125 ″ A / V Nhema
Bhatiri 48V 13AH, Lithium Battery, iine 2A charger-SANS
Ziva bhasikoro munzira nyowani nyowani ine 26 inch Electric Bike muBlack. Iyi 7-yekumhanyisa bhasikoro rekubatsira bhasikoro rine aruminiyamu furemu uye ino yakapfava kukwira kuchakuendesa iwe kwese kwaunoda kuenda zviri nyore. Iyo zvakare ine kumberi nekumashure disk mabhureki. Iyi e-bhasikoro inouya nebhatiri (kugona kwe13Ah) uye charger. Uchibatsirwa neyedu yekuratidzira kwe LED, unogona kusarudza kumhanya kwakanakira iwe nematatu ekubatsira modes. Kukwanisa kunongedza kuchido chemoyo wako uchisvika kwaunoda kuenda nekukurumidza pasina nguva neiyo 48v 500 watt mota! Iyi e-bhasikoro yakakwana pakugadzira yako mangwanani kuenda kana yekuzorora bhasikoro kuve nyore uye kuzorora. Pasina kumanikidza kuchovha madaro marefu kana iwe uine 26 inch Magetsi Bhasikoro. Iyi bhasikoro yemagetsi ichaita kuti iwe utenderedze misoro paunenge uchifamba zvakanaka.
Mutengi: Ini ndinoda chinzvimbo chekugara nekuti ini handitambure nekurwadziwa nemusana nekuda kweiyo nzvimbo isiriyo. Yakanyatsonaka, yakapfava, uye dhizaini dzakangonaka. Ini zvakare ndinofarira kuti inoratidzika isinganzwisisike kana ichienzaniswa nechero mamwe emagetsi emabhasikoro. Bhatiri rakanaka, uye kuchaja kunokurumidza. Chigaro chinoratidzika kunge chakasununguka uye chinogamuchirwa. Ndakatenga maviri emabhasikoro aya ini nemukadzi wangu kuti tikwanise kuchovha mamaira gumi nemana kubva pamba kuenda kumahombekombe tichidzoka nekunakidzwa nemhepo. Ini ndinoda bhasikoro uye ndanga ndichiitasva kanokwana kaviri pasvondo.
Pashure: SEBIC 700c yechinyakare yekufambisa disc yakaputsa mugwagwa guta ebike
Zvadaro: SEBIC 26 inch mafuta egomo tiresnow beach gungwa mid drive mota yemagetsi bhasikoro